नेपाल आज | लकडाउनमा युवा संघका नेता अमित लामाको मस्ती, गल्फको रमाइलो र जाँडपानीमा नेतालाईचाहिं छुट ?
शनिबार, ०३ जेठ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल केन्द्रिय नेता अमित लामा जेष्ठ २ गते शुक्रबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको गल्फ कोर्समा केहि साथिहरुसँग गल्फ खेलिरहेका थिए । त्यो पनि लकडाउनको समयमा । सरकारले लकडाउनमा बाहिर ननिस्किन उर्दी जारी गरेको छ । तर पावर र पहुँचको फुर्ती लगाउँदै उनी धनी तथा उपल्लो वर्गका मानिसले खेल्ने खेलको रुपमा परिचित गल्फ खेल्नमै व्यस्त देखिन्थे । महँगो मेम्बरशिपको फुर्ती लगाउँदै उनी सरकारी निर्णयको उल्लङ्घन मात्र गरिरहेका थिएनन्, कोरोना सार्ने सम्भावनासँग खुलेआम साक्षात्कार समेत गरिरहेका थिए ।
सर्बहारा बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता उपल्लो वर्गले खेल्ने खेल खेलिरहेकाे त्यो पनि कोरोना महामारीको बेला भन्दै पार्टीमा उनको आलोचनामात्र भएको छ । कतिपय कार्यकर्ताले ....भन्दा देख्नेलाई लाज भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सरकारी निणर्य नमानेर पार्टी अनुशासनविपरित गएको भन्दै उनलाई धेरै कार्यकर्ताहरुले नक्कली कम्युनिष्टको ट्यागसमेत भिराइरहेका छन् ।
पार्टी अनुसासनविपरित जाँडपानीमा ब्यस्त नेता !
कोरोना महामारीका कारण सरकारले अतिआवस्यक सेवा मात्र खुल्न दिएको छ। संसार नै बन्द भएको बेला नेकपाको भातृ संघठनका युवा नेता लामाको निम्ति गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्ट खुल्ला रहेको देख्दा सबै अचम्म परेका छन् । उनले गल्फको साथसाथै आफ्ना केहि साथीहरुसंग मदिराको मस्ती पनि गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्टमा लिन भ्याएका छन्। यस्तो कार्य एक त सरकारी निर्णयको उल्लङ्घन हो भने अर्कोतर्फ पार्टी अनुशासन विपरितको कामसमेत हो । अव उनलाई के कारवाही हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।